वाक्यहरू अनलाइन पार्सि - - कुन साइटमा हेर्ने हो? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
वाक्यहरू अनलाइन पार्सि - - कुन साइटमा हेर्ने हो?
मैले कुनै साईट फेला पारेन जहाँ तपाईं आवश्यक वाक्य वाक्य पार्स गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेटवर्कमा वाक्यहरूका लागि पार्सि rules नियमहरूमा चीट पानाहरू सहित धेरै साइटहरू छन्, जहाँ सबै कुरा एक पहुँच भाषामा लेखिएको छ। तपाईं यो साइट र यो साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ सरल र जटिल वाक्य पार्सिंग उदाहरणहरू छन्।
त्यहाँ एक राम्रो साइट छ जहाँ तपाईं सिन्ट्याक्टिक र मोर्फोलोजिकल त्रुटिहरू पार्स गर्न सक्नुहुनेछ जुन हामी बनाउँछौं, साइटले तपाईंलाई प्याक लेख्न, तपाईंको कम्पनीको नाम छनौट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, र अन्य धेरै। यहाँ आउनुहोस् र कुनै पाठ http://seosin.ru/page/5/ विश्लेषण गर्नुहोस्
भोकाएका कुकुरहरू, र घरको संवेदनाले छिटो ज quickly्गलबाट दौडे।
चयन गरिएको वाक्यमा शब्दहरूको श्रेणीबद्ध निर्भरता को आरेख बनाउनुहोस्
एक वाक्य पार्स गर्न, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि तिनीहरू किन यसको साथ आए। उनले हामीलाई प्रस्तावका सदस्यहरूलाई प्रश्नको उत्तर दिनका लागि भाषणको अंशका रूपमा पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, जहाँ मुख्य र माध्यमिक सदस्यहरू। एक चाखलाग्दो भिडियो ट्यूटोरियल हेर्नुहोस्:
एउटा साइट जसले तपाईंलाई अनलाईन प्रस्ताव प्रस्ताव गर्न मद्दत गर्दछ।
वाक्यहरूको सिन्ट्याटिक विश्लेषणको लागि लोकप्रिय साइटहरू हेर्नुहोस्: यहाँ, यहाँ, यहाँ।
वाक्य पार्सिंगको बारेमा मात्र
यो यस क्रममा गरिन्छ।
तपाईं धेरै साइटहरूमा प्रस्तावहरूको अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्सिमा एकै समयमा धेरै नियमहरू सामेल छन्, तपाईंले कुन नियम अल्पविराम र अन्य विराम चिह्नहरू राख्नुहुन्छ, भाषणको अंश परिभाषित गर्नुहोस्, वाक्य सदस्यहरूको नाम राख्नुहोस्, पार्सिंग र अन्य धेरै निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ।
इन्टरनेटमा पदव्याख्या गर्न मद्दत गर्ने पर्याप्त साइटहरू छन्, तिनीहरू रूसी भाषामा परीक्षा वा अन्य परीक्षणहरूको तयारीको क्रममा स्कूली बच्चाहरूको आगमनको कारण पनि धेरै ओभरलोड भएका छन्। यहाँ एक साईट जाँच गर्नुहोस्।
यस बीच शुक्रबार आफैंमा भाग्नको लागि छोडियो
हातमा केवल एक कुल्हाडीको साथ क्रियाहरू।
तपाईं यस साइटमा इन्टरनेटमा वाक्यांश अनलाइन पार्स गर्ने योजनाहरू बनाउन वा हेर्न सक्नुहुन्छ - त्यहाँ सबै कुरा राम्रा छन र तपाईंले योजनाहरूमा देख्नुहुनेछ र याद गर्नुहुनेछ, किनकि सबै कुरा सुविधाजनक रूपमा समूह गरिएको छ र हातमा छ। नेटवर्कमा त्यस्ता धेरै शैक्षिक साइटहरू छन् - विकल्प प्रयोगकर्ताहरूमा छ।
योजना अनुसार वाक्यहरूको वाक्य रचनात्मक विश्लेषण यस साइटमा फेला पार्न सकिन्छ।
तर यो अभ्यास गर्न अझ रमाईलो छ कि तपाइँ वाक्यको वाक्य रचनात्मक विश्लेषण सही तरीकाले सिक्नु भएको छ।
यो स्कूल सहायक वेबसाइटमा अनलाइन गर्न सकिन्छ।
सिमुलेटर उज्ज्वल, सहज र सस्तो छ।
तुरून्त चयन गरिएको उत्तरको मूल्या gives्कन दिन्छ: सहि - ठीक छैन।
वाक्यलाई पार्सि when गर्दा तपाईं उदाहरणहरूमा शब्दहरूलाई रेखांकित गर्न सक्नुहुन्छ।
वाक्य पार्स गर्नु अझ पनी साधारण कुरा छैन, तपाईलाई पार्सि scheme स्किम जान्नु आवश्यक छ, र त्यहाँ तपाईले वाक्यको विशेषताहरु, वाणीको अंशहरु, विराम चिह्नहरु र नियमहरु लाई जान्नु पर्छ जुन यो सहि निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। यो सबै यहाँ साइटमा देख्न सकिन्छ। र उदाहरण को लागी, यो एक सरल उदाहरणको साथ कसरी गरिन्छ एक भिडियो हेर्नुहोस्।
इन्टरनेटमा त्यहाँ धेरै सेवाहरू छन् जुन तपाईंलाई रूसी भाषाको साथ मद्दत गर्दछ। यो शब्दहरूको ध्वन्यात्मक विश्लेषण, संरचना द्वारा शब्दहरूको विश्लेषण, र पाठ्यक्रम वाक्यांशहरूको सिन्ट्याक्टिक विश्लेषण हो।
यो साइट http://edu.glavsprav.ru/info/sintaksicheskij-razbor/ वाक्य वाक्य पार्सि on मा सबै जानकारी प्रदान गर्दछ।
यस साइटमा वाक्य पार्सि .को धेरै उदाहरणहरू छन्।
पार्सि the प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रममा अवस्थित छ। मलाई लाग्छ कि यो रूसी भाषामा व्याकरणात्मक विश्लेषणको सबैभन्दा गाह्रो र समय खपत गर्ने प्रकार हो, किनकि वाक्यलाई विशेषताको रूपमा चित्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ, वाक्यको सदस्यले क्रमबद्ध गर्नुपर्दछ र भाषणको निर्धारित अंश हो। प्रस्तावलाई राम्ररी विश्लेषण कसरी गर्ने भनेर हेर्न अनलाइन यहाँ गर्न सकिन्छ र यसैले तपाईले धेरै समय बचाउनुहुनेछ।
कुराकानी चर्को, स्पष्ट (भिन्न), गैर-नीरस हुनुपर्दछ, यदि सम्भव भएमा स्पष्ट र सरल रूपमा। स्वर आत्मविश्वास, दृढ विश्वास, शक्ति हुनुपर्छ।
कृपया सहयोग गर्नुहोस्
Rep को जवाफ "अनलाइन पार्स गर्ने वाक्यांश - मैले कुन साइटमा हेर्नु पर्छ?"
20.02.2018 गर्न 21: 29
वाक्य बनाउनमा मद्दत गर्नुहोस्। यदि तपाईले five देखि, थप्नुभयो भने, तपाई एघार हुनुहुनेछ
26.04.2018 गर्न 18: 45
18.09.2018 गर्न 14: 35
वाक्य पार्स गर्न सहयोग गर्नुहोस्:
एक व्यक्ति जसले यी मुलुकहरूमा आफैंलाई साँच्चिकै भेट्छ ऊ वास्तवमै आनन्दित हुन्छ: डु boat्गामा फालिएको राइफललाई बिर्सिसकेपछि, ऊ उसको अघि खोलिएको संसारको प्रशंसा गर्न थकित हुँदैन।
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,365 प्रश्नहरू।